Dowlada Soomaaliya oo sheegtay in 240 maleeshiyo al-Shabaaab ah lagu dilay saldhiga Halgan - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeHomeDowlada Soomaaliya oo sheegtay in 240 maleeshiyo al-Shabaaab ah lagu dilay saldhiga Halgan
June 10, 2016 Puntland Mirror Home, Somalia, South-Central 0
Wasiirka amniga dowlada federaalka Soomaaliya, Cabdirisaaq Cumar oo wareysi siinaya idaacada dowlada (Raadiyo Muqdisho).
Ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ayaa dilay ilaa iyo 240 dagaalyahan oo al-Shabaab iska hor imaad ka dhacay saldhig ay ciidamada militariga Itoobiya ku leeyihiin bartamaha Soomaaliya maalintii Khamiista, sida uu sheegay wasiirka amniga dowlada federaalka Soomaaliya, Cabdirisaaq Cumar.
Sagaal ciidamada Itoobiya ah ayaa ku dhintay dagaalka ka dhacay deegaanka Halgan, oo qiyaastii 300 km dhanka waqooyiga ka xiga caasimada Muqdisho, dagaalkaas ayaa bilowday markii dagaalyahanada al-Shabaab ay soo weerareen saldhiga subaxnimadii hore, sida uu wasiirka amniga u sheegay warbaahinta dowlada (Raadiyo Muqdisho).
Ciidamada Itoobiya ayaa qayb ka ah Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya, kaasoo lagu doonayo in lagu soo cesho xasiloonidii dalka ku yaala Geeska Afrika, halkaas oo dagaal sokeeye ka soconayay muddo labaatan sanno ku dhow. Weerarkaan ayaa daba socday weerar ay al-Shabaab ku qaadeen bartamihii bishii Janaayo saldhig ay ciidamada Kiinya ku lahaayeen gudaha Soomaaliya, kaasoo ay maleeshiyada sheegtay in ay ku dishay 100 askari. Dowlada Kiinya ayaa ku adkaysatay in khasaaro halkaas ka dhacay wallow aysan bixin tirada dhimashada.
(Warbixintan waxaa qortay wakaalada wararka dhaqaalaha, Bloomberg Business, waxaa turjumay Puntland Mirror)
June 14, 2016 Deg Deg: Dhawaaqa madaafiicda oo caawa laga maqlayo gudaha Muqdisho
Boosaaso-(Puntland Mirror) Isimada Puntland ayaa ku guuleystay in ay xaliyaan khilaafkii ka taagnaa dekada magaalada Boosaaso, sida manta oo Arbaco ah uu sheegay Boqor Burhaan Boqor Muuse. Munaasabada lagu soo bandhigayay heshiiska ayaa maanta ka [...]
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland’s President Abdiweli Mohamed Ali is expected to travel Galkayo on Thursday, official said. “Today the President Abdiweli will travel to Galkayo to make improvements about the security measures of the town [...]